DEG-DEG: Barcelona Oo Saddex Kamida Daafaceeda Toddobaadkan Iibinaysa & Shuruuda Kaliya Ee Ku Xidhan - Laacib
HomeWararka Ciyaaraha MaantaDEG-DEG: Barcelona Oo Saddex Kamida Daafaceeda Toddobaadkan Iibinaysa & Shuruuda Kaliya Ee Ku Xidhan
DEG-DEG: Barcelona Oo Saddex Kamida Daafaceeda Toddobaadkan Iibinaysa & Shuruuda Kaliya Ee Ku Xidhan
July 19, 2021 Apdihakem Omer Adam Wararka Ciyaaraha Maanta, Wararka La Liga 0
Kooxda Barcelona ayaa lagu soo warramayaa inay diyaar u tahay inay toddobaadkan kooxdeeda ka dirto saddexleyda daafacyada ah ee kala ah Samuel Umtiti, Clement Lenglet iyo Sergino Dest.
Barcelona ayaa dhexda kaga jirta xaalad dhaqaale oo adag waxaana ay ku qasbaysaa inay qaar kamida ciyaaryahanadeeda iibiso waliba si deg-deg ah.
Sida uu sheegayo wargeyska Sport, saddexda daafac ee kala ah Lenglet, Dest iyo Umtiti ayaa isla toddobaadkan laga diri karaa Camp Nou iyadoo shuruuda kaliya ee iibkooda ku xidhani ay tahay in dalabaad macquul ah laga soo gudbiyo.
Warbixinta ayaa sheegaysa in kooxaha ku xifaaltama London ee Arsenal iyo Tottenham ay doonayaan saxeex Lenglet halka Bayern Munich iyo Inter Milan ay isha ku hayaan xaalada Dest.
Dhinaca kale daafaca French-ka ah ee Umtiti ayaa lala xidhiidhiyay kooxdiisii hore ee Lyon oo ahayd kooxdii uu shan sano kahor kaga soo biiray Barca.
Blaugrana ayaa si weyn ugu baahan inay horumar ka samayso xaaladeeda dhaqaale ee kakan kaddib markii ay in ka badan 1 Bilyan oo pound oo dayn ah gashay intii lagu jiray xaaladii adkayd ee Korona Fayras.
Barca ayaan awoodin inay diiwaan gashato afarteeda saxeex ee cusub ee kala ah Sergio Aguero, Eric Garcia, Memphis Depay iyo Emerson Royal sababtoo ah inay 40% xadigii mushahar bixinta horyaalka La Liga.